WAX WANAAGSAN MA DHICIN: NOOCYO STRAWBERRY AH "GIGANTELLA" - STRAWBERRIES
Beeralayda xirfadlayaasha ah sanad walba waxay ku dadaalaan inay kala qaybiyaan dhirta, taas oo "ku nool" on sirqoolladooda. Sidaa darteed, dadkan ayaa si joogto ah u raadinaya noocyo cusub oo dalagyo kala duwan oo awood u leh in ay siiyaan beergooys aad u wanaagsan, iyo sidoo kale, miraha aad u fiican.
Sida for strawberries, wakiilka ugu mudan ee berry this waa noocyo kala duwan "Gigantella". Waxa uu muddo dheer "degay" dhulkeenna, isaga oo aan caqabadkeena ahayn maahan cimilada kulaylaha.
Laakiin si kastaba ha ahaatee, bannaanka u secrete laba sariirood ubax this berry this, iyo qaybtan qayb yar ee goobta ay maamusho buuxinta berry ah ee jiilaalka leh xilli gaaban ee fruiting of "Gigantella".
Sidee ay suurtagal u tahay in ay koraan badan oo miro ah meel yar? Haa, aad u fudud, sababtoo ah "Gigantella" - noocyo aan caadi ahayn.
Dhammaan "waxyaabaha muhiimka ah" ee fasalkan ayaa lagu sharxay hoos.
Strawberry "Gigantella" waa natiijada ka dhalatay shaqada beeraha Holland. Kala duwan tani waxay heshay magaceeda sababtoo ah cabbirka cajiibka ah ee ugu horeeya ee berry ah - iyaga waxay ku dhici kartaa 100 garaam oo miisaankeedu yahay.
Dhirta kala duwan ee noocan oo kale ah waa mid aad u awood badan oo kori kara 0.35 - 0.5 m dhererka iyo 0.5 m dhexroor, inkastoo xaqiiqda ah in ay tahay baadiyaha.
Laakiin weli, waxay ku yaalliin meel aad u adag, taas oo kuu ogolaaneysa inaad ku shubtid geedo qaro weyn. Intaa waxaa dheer, strawberry this si dhakhso ah u koraa, iyo sidoo kale waxay sameeyaan badan oo ah whiskers, kuwaas oo u baahan in laga saaro habka bixitaanka. Caleenta duurka waa cagaar khafiif ah, oo leh dusha sare. Peduncles xoog leh, qaro weyn.
Marka la eego Bisaylkiisa, "Gigantella" waa strawberry dhexdhexaad ah, waxay gasho fruiting qeybtii hore ee bisha July.
Berry ka soo goosashada ugu horreysay waa kan ugu weyn (illaa 100 g), miraha dambe ee miisaanka ku saabsan miisaanka ku saabsan 50 - 60 g. Midhaha miraha waxay yihiin kuwo aad u qurux badan, casaan midab leh, qaab la mid ah strawberry-ka iyo abuur wanaagsan.
Dhadhanka strawberry this waa mid aad u fiican, dhexdhexaad ah macaan, leh dufanka bahalka basal iyo talooyin of anaansamiinnada. Jirka labadaba waa mid casri ah oo ku filan, taas oo suurtogal u ah inay ku kaydiso miraha buuggan wakhti dheer waxayna qaadaan.
Buundadaas si ammaan ah ayaa loo qaboojin karaa xilliga jiilaalka, dhadhanka iyo muuqaalkuna waxba kama beddeli doono. Dhirta ayaa aad u sarreeya, dhalidda ka timid baadiyaha waxay qiyaastii 3 kg oo ah nooca berry u bislaaday.
Gigantella wax khasaare ah kuma laha, inkasta oo dadka qaarkiis dhadhanka dhirtaasi ay u muuqdaan kuwo aan habbooneyn. Mid ka mid ah faa'iidooyinka noocyo kala duwan waa caabbinta barafka, laakiin duurka waxay wali u baahan yihiin hoyga xilliga jiilaalka, tan iyo strawberries waa dhir aad u sarreeya.
Goobta duurka strawberry waa inay noqotaa qorrax iyo jiifsan dhinaca koonfurta-galbeed, oo leh jilicsan yar ee goobta. Goobta sariirta hoosteeda waa inaysan ku dhicin dhulka hoostiisa, iyo sidoo kale aagga oo leh qoyaan badan.
Biyaha qulqulka biyaha waa inuu ahaadaa ugu yaraan 0.8 - 1 m. Diyaarinta ciidda beeritaanka strawberries waa caadi, waa, waa in dib loo soo qodo, lagu qiyaaso qashin, iyo sidoo kale bacrimiyey.
Daadinta geedo waxay noqon kartaa 2 jeer sannadkii - horraantii dayrta ama horraanta gu'ga. Waxa ugu muhiimsan waa in heerkulka dhulka uusan ka hooseynin 15 ° C, haddii kale geedo ma qaadan doonaan xididka.
Geedo ayaa labadaba la iibsan karaa lana koray shakhsi ahaan. Horumarinta geedo strawberry ma noqon doonto hawl weyn oo adiga ah haddii aad waligaa la wareegtay geedo sii kordhaya.
Waxaa muhiim ah in la abuuro xaalado deegaan oo wanaagsan, oo ah qadar ku filan qoyaan, heerkul sarreeya (+ 20 + 25 ° C), iyo sidoo kale nalal badan (laydh gaar ah ayaa la isticmaali karaa). Geedo waa in ay muuqdaan 20-25 maalmood ka dib beeridda miraha.
Seedling this waxay ubaahan tahay in la quusiyosi ay geedo leeyihiin nidaam xidid si wanaagsan loo horumariyey.
Marka aad dhigayso geedo fogaan ah 5 cm midba midka kale, dhirta oo dhan waxay noqon doontaa mid raaxo leh. Cagaarshowga beeritaanka caafimaad leh waa inuu leeyahay 5-6 caleemo run ah, iyo sidoo kale xididdada uriciform ah, taas oo la gooyaa dhererka 6-7 cm ka hor beerashada.
Haddii ay dhacdo heerkulka sare iyo qoyaanka qoyan, waxaa lagama maarmaan ah in laga tago 1 - 2 warqad si loo yareeyo aagga uumiga qoyaanka.
Dhirashada geedo waa inay ahaataa fogaan ah 15 - 20 cm oo midba midka kale ah, isla markaana u dhexeeyaa safafka u dhow duurka waa inay ahaadaan ugu yaraan 70 cm. Waqtiga ugu fiican ee beerista duurka dhulka waa roobab daruuro leh, laakiin maahan macnaha qorraxda.
Dhirta yaryar ee biyaha ayaa u baahan doona inay isla markiiba noqdaan, oo ay aad u badan yihiin, 0.5 - 0.6 litir oo biyo ah oo digaag ah. Qallajinta u dhaxaysa safarka waa in la raacaa ka dib markaad waraabiso. Ka dib 10-15 maalmood waa lagama maarmaan in la hubiyo in dhammaan geedo ka qaaday xididka. Haddii qaar ay dhintaan, markaa waxay u baahan doonaan in laga saaro, prikopav ka dib duurka cusub.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo sharciyada beerto strawberries.
Xeerarka daryeelka ee "Gigantella"
"Gigantella" waa nooc aad u baahsan oo daryeel ah, sidaa daraadeed waxaa lagama maarmaan ah in ay si joogto ah u daryeelaan dhirtaas.
Guud ahaan, dhaqanka strawberry waa mid aad u badan oo u baahan baahinta waraabka, maadaama biyaha dhulka ma awoodi doonaan in ay bixiyaan duurka u leh qoyaan ku filan. Haddii qoyaanka guga ku yaryahay, markaa bilaabashada waraabinta waa inay ku beegan tahay dhammaadka Abriil. Saddex waraabood oo dhan May, Juun iyo Julaay ayaa ku filan si ay duurka u dareemaan inay aad u fiican yihiin.
Waxay noqon doontaa 10 - 12 litir oo biyo ah halkii mitir labajibbaaran. m. sariiraha. Marka ay duurka u bilaabaan inay Bloom, tani waxay muujinaysaa bilawga wajiga ugu firfircoon ee horumarinta dhirta ee duurka. Waa waqtigan in strawberries u baahan tahay ugu qoyaan.
Sidaa darteed, waa in aan si taxadar leh u eegno la soco qoyaanka ciidda. Waqtigaan, qadarka biyaha ee loo baahan yahay in la kordhiyo 20 - 25 litir mitir labajibbaaran. Biyaha laftoodu ma aha inay qaboobaan, sababtoo ah waraabinta noocaas oo kaliya waxay dhibeysaa caleemaha iyo xididdada duurka.
Cawska qallalan ee sariirta strawberry ayaa kaalin muhiim ah ka ciyaara. Tan iyo markii midhaha "Gigantella" ay aad u ballaaran yihiin, miisaankoodu wuxuu hoos u dhacaa dhulka, kaas oo u oggolaanaya dulinada kala duwan ama fangasku inuu ku "dejiyo" midhaha.
Sidaa darteed, dhulka ku wareegsan sariiraha waa in lagu daboolaa lakabka caws, kaas oo ka ilaalin doona strawberries ka cawska ama horumarinta kallana.
Markii ugu horeysay Mulch waa in la isticmaalaa guga hore, ka dib furitaanka duurka. Waxaad u baahan tahay inaad ku celiso nidaamkan waqtigeeda marka midhaha ay isku xidhan yihiin. Isla mar ahaantaana, bacda ama bacda qallalan ayaa ku habboon inay noqoto wax lagama maarmaanka ah, kaas oo sariirta la buuxiyo, laakiin maaha duurka oo ay iska baxaan.
Cunto strawberries ayaa door muhiim ah ka ciyaara geedi socodka beerashada, gaar ahaan xaaladaha carrada bacriminta yar. Guga hore, waxaad u baahan tahay inaad sameyso buuxa oo Bacriminta ah.
Marka ay burooyinku bilaabaan inay sameeyaan, iyo ka dib - midhaha, dhirta runtii u baahan tahay potassium, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad cusbo potassium ah. Si kor loogu qaado dhalidda ma faragalinayso geedi socodka duurka oo leh xalka boric acid. Ka dib marka dalagga la goosto, waxaa lagama maarmaan ah in la bacrimiyo ciidda leh Bacriminta oo dhan si ay dhirtu u dareemaan gaajo muddada jiilaalka.
Hadda waxaad samayn kartaa gabagabada cadaaladda ah in noocyada strawberries noocyo "Gigantella" waxay noqon doontaa wax aad u weyn oo ku saabsan goob kasta. Sidaa darteed, isagoo beeray dhowr geed oo kala duwan oo kala duwan, ma aha oo kaliya inaad ku qanacsan tahay beergooyska, laakiin sidoo kale xulo dhowr mitir oo laba jibbaaran oo duurka cusub. Guulaha